ရုံးလုပ်ငန်းအသုံးချ Adobe Photoshop ကို မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုလိုသူများ၊ Photo Editing ကို စိတ်ဝင်စားသူများနှင့်၊ လုပ်ငန်းခွင် စတင်ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက် တက်ထားသင့်သော Adobe Photoshop ဘာသာရပ်ကို တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Faculties : Daw Khin Thant Sin
Commitment : 95 Mins
Photoshop သင်ခန်းစာမှာတော့ Adobe Photoshop Cc ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာရရှိနိုင်မှာကတော့ •	Adobe Photoshop Cc 2017 ရဲ့ User Interface မှစတင်ကာ အသုံးအနှုန်းများမှတ်သားခြင်း •	ဖိုင်များအား တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊မြင်ကွင်းပုံစံများပြောင်းလဲ ချိန်ညှိခြင်း •	Photoshop တွင်သုံးနိုင်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားများနှင့် အရောင်ပုံစံကွဲများ •	ဓါတ်ပုံ size များပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အသုံးများသော Tools များ •	Layer များအလုပ်လုပ်ပုံ၊ selection ပြုလုပ်နည်းအမျိုးမျိုး •	စာလုံးထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပုံများ၊ ရိုးရှင်းသော Logo ၊ လိပ်စာကတ်ပြုလုပ်နည်းများ •	မိမိအသုံးလိုသော file ပုံစံအမျိူးအစားဖြင့် ဖိုင်ထုတ်ခြင်း အစရှိတာတွေကို လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
9 Video(s) Quiz
01. Getting Start To Photoshop cc 2017
02. Working with Multiple Document
03. Panning And Zooming
04. File Format And Color Mode
05. Image Resizing
06. How To Crop Image
07. Understanding Layers
08. Using Selection Tools ( Part - 1)
09. Using Selection Tools ( Part - 2)